मलाई विश्वास छ की यातायातमा बढाएको भाडा वृद्धि सरकारले फिर्ता लिनेछ
विशेष - रिपोर्ट , अन्तर्वार्ता
कृष्ण गिरी ९ असाेज ।
दशैं तिहारको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले यातायात व्यवसायीसंग गरेको सम्झौता,भाडामा १० प्रतिशत वृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिका बारेमा विद्यार्थी संगठन अझ पूर्व अखिल किन मौन बसेको भनेर अनेरास्ववीयुका सचिव सुदेश पराजुलीसंग जनतापाटीका कृष्ण गिरीले गरेको कुराकानी ।
दशैंको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले यातायातमा १० प्रतिशत भाडा बढायो र पेट्रोलियम पर्दाथको पनि मूल्य बढायो तर पनि विद्यार्थी संगठन किन मौन बसेका छन् अखिल, आफ्नो पार्टीको सरकार भएकाले हो कि नबोलेको ?
यो सरकारले यस्तो गलत निर्णयपनि गर्न सक्छ र ? भन्ने लागेको थियो । तर यो सरकारले यी दुबै निर्णय गरेको छ । दशैंको पूर्वसन्ध्यामा यातायातमा १० प्रतिशत भाडा बढायो र पेट्राेिलयम पदार्थको पनि मूल्य बढायो यसमा हाम्रो संगठनको ध्यान गएको छ । सरकार यसमा सचेत बन्न सकेन । सरकार भनेको कम्युनिस्टको हो । जससंग जनताको धेरै आसा विश्वास र भरोसा छ । तर यातायातमा सिन्डिकेट लगाउनेहरुसंग नै मिलेर भाडा बढाउनु सरासर गलत निर्णय हो ।
यो सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्नु पर्ने हो । तर माफियाको घेरामा पर्दैछ कि भन्ने आभास युवा विद्यार्थी र आम जनतामा परेको छ । तर पनि हामी अझै आशामा छाै‌ कि यो निर्णय सरकारले फिर्ता लिने छ । जहाँ सम्म अखिलको कुरा छ । यसको विगतको इतिहास हेर्नु आवश्यक छ । यसले सधै जनताको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छ । पार्टीहरु गणतन्त्रको पक्षमा बोल्न नसक्दा पहिला बोल्ने संगठन अखिल हो । सरकारले गरेका नराम्रो निर्णयहरुको विरोध गर्ने संगठन अखिल नै हो । चाहे त्यो आफ्नै पार्टीको सरकार किन नहोस । तर अहिले सरकारले गरेको निर्णयको विरोधमा अखिल बोल्न नचाहनु आम चासोको विषय बनेको छ ।
यातायातमा र पेट्रोलियम पर्दाथको मूल्य बढ्दा नबोल्नु अखिलको लागि नै प्रति उत्पादक हुन्छ । यस विषयमा प्रमुख नेतृत्वले सोच्नु पर्छ । तर अहिले कहि न कहि संगठनमा धमिलो भएको भान भएको छ । यदि सरकारले यो निर्णय सच्याएन भने हामी सडकमा आउँछौ नै ।
कतै अखिललाई विभाजन गराएर आफ्ना गतल निर्णयको विरुद्ध सडकमा नआउन भनेर पार्टी नेतृत्वको नै भूमिका त छैन कि ?
अहिले यस्तो त भएको होइन । दुई पार्टीको एकताको कारण संगठन पनि एकताको संक्रमणकालिन समयमा छाै । तर पनि हामी आम नागरिकका आवाज बोक्न पछि पर्नु हुँदैन । मूलभूत रुपमा सरकारले राम्रा काम गर्नु पर्छ । यसलाई जनताले विश्वासको मत दिएको हो । जब कि जनताको विपक्षमा निर्णय गर्नु हँदैन । सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन भने हामीले खबरदारी गर्न पछि हट्नु हुदैन । हामी राम्रोको पक्षमा हो । कसै एक अथवा अमुक नेताको होइन ।
त्यहि भएर त हामी स्वतन्त्र पनि छौं । पार्टीको राम्रो कामको समर्थन र जनताका विक्षमा भएका निर्णयको विरोध गर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ । अब जसले जनताको आवाज बोक्छ त्यहि नेता हो । मुल मान्यता बोकेर हिड्नु नै अखिलको इतिहास छ । यसकालागि तयार हुनु पर्छ ।
विगतको इतिहास बचाउनु पर्छ भन्नु भयो ,यसको इतिहास जनताको आवाज बोक्ने,विद्यार्थीको हकहितको पक्षमा लड्ने संगठन हो तर अहिले के यो संगठनमा विचारको स्खलन आएको हो ?
हामीहरुको आन्दोलनको समिक्षा गर्ने समय त भएको छ । विद्यार्थी आन्दोलन अब कसरी अगाडि बढाउने भनेर समिक्षा गर्नु पर्ने बेला आएको छ । २०६२–०६३ को जनआन्दोलन पछिको विद्यार्थीको भूमिका र यसको दिशाबारे बहस हुन आवश्यक छ । यसको नेतृत्व र आन्दोलनको बारेमा सोच्नु पर्ने समय आएको छ ।
अब गणतन्त्र आएपछिको विद्यार्थीको कार्यभार बोक्न सक्छौं कि सक्दैनौ हेर्न समय आएको छ । अब विद्यार्थी आन्दोलन कसरी लैजाने । हिजोको बाटोमा हिडेर अब हँुदैन । हिजो फरक थियो राजनीतिक परिस्थिति अब फरक छ । हिजो स्तन्त्रताका लागि लडेको अखिल अब समृद्धिको लागि लाग्नु पर्ने छ । यसकोलागि सहि नेतृत्व चाहिन्छ । अब हिजोको इतिहासमात्र जप्ने होइन भविश्य देखाउन सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ । यो भनेको समय र परिस्थिति अनुसार चल्न सक्ने हुनु पर्छ नै ।
पार्टी एकता सहित संगठनको एकता हुँदै गरेको अवस्थामा सरकारको गलत निर्णयको विरोध गर्दा आफ्नो पद धरापमा पर्ला भनेर विद्यार्थी नेताहरु नबोलेका हुन कि ?
यस्तो नहुनु पर्ने हो । हामी विद्यार्थी हाै । विद्यार्थीको स्वभाव नै यस्तो हुुँदैन । तर यसरी डराउनु भयो भने मेरो भन्नु केहि छैन । पदका लागि अन्याय अत्याचार सहने प्रवृति विद्यार्थीको होइन् । विद्यार्थी आन्दोलनको बारेमा सचेत नेताले यसको पछि लाग्दैन । समाजमा भोगेका कुरा, सरकारले गरेका गलत निर्णयको विरुद्ध जानै पर्छ । अहिले नबोल्ने भन्दा पनि संगठनको एकताको प्रक्रियाले असर गरेको होकि भन्ने लागेको छ । यदि एकताको लागि पनि विधि र विधान अनुसार,प्रक्रिया र पद्धतिमा चल्ने हो भने नेताले गरेका र सरकारले गरेका गलत निर्णयको विरोध गर्न कसैले रोक्दैन ।
तर पूर्व एमाले र माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन बोलेनन नि त ?
विद्यार्थी आन्दोलनको चरित्र नै मिल्दैन नेताको ताबेदारी गर्नेमा । हामी त हाम्रो समुदायको पक्षमा बोल्ने हो । यसमा कुनै अमुक नेताले के भन्छ भन्ने नै हुदैन । हामी नेताको हित भन्दा आफ्नो समुदायको हितको पक्षमा लाग्ने हो ।विचारमा सामिप्यता र संगठनमा स्वतन्त्र छाै । हामीले यहि मुलमन्त्र अनुसार चल्नु पर्छ । हामीले क्षणिक स्वार्थमा लागेर आन्दोलनबाट अलग हुनु हुदैन । हामी संगठनको पक्षमा लाग्नु पर्छ । यदी यस्तो गर्न सकेनौं भने अखिलको इतिहास,वर्तमान र भविष्य माथि नै अन्याय गर्ने छाै ।
कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ तर यस्ता निर्णयले जनताको हित गर्दैन नि होइन र ?
हो ,यो कम्युनिस्टको सरकार हो । तर सबै निर्णय गलत गरेको छैन् । तर एकआध निर्णयले जनतालाई समस्या परेको छ । तर यो सरकारले धेरै राम्रा काम पनि गरेको छ । चीनसंगको पोर्टुकल सन्धि भएको छ । अब हामी भारतमाथिको पूर्ण निर्भरताबाट मुक्त भएका छाै । अहिलेसम्मको अराजकताबाट देश सहि दिशामा आउँदै छ । हामीलाई मत दिने जनताले मात्र होइन समपूर्ण नेपालीले यो सरकारसंग आशा विश्वास र भरोसा गरेको छ । यो बारेमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपा ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड सचेत हुनै पर्छ । होइन भने यस्तै गलत निर्णयमाथि खेलेर कम्युनिस्टलाई बदनाम गराउने छ । त्यसकारण यस्ता निर्णयहरु सच्याउनु पर्छ ।
आधारभूत कुराहरु सरकारले आफै संचालन गर्नु पर्छ भन्ने कुरा अहिले प्रष्ट भएको छ ,जस्तो शिक्षा,स्वास्थ्य र यातायात लगाएतका कुराहरु ?
हो संविधानले मौलिक अधिकार भनेका कुराहरु सरकारले आम नागरिकलाई दिनु पर्छ । सरकारले शिक्षा स्वास्थ्य र यातायात जस्ता महत्वपूर्ण कुराहरु आफैले संचालन गर्नु पर्छ । सरकार भन्छ समाजवादमा जाने तर सरकारका अंगहरुमा पंचायती समयका संरचना छन् । जबसम्म यो संरचना भत्काउन सक्दैनाै तब सम्म यहाँ केहि हुँदैन ।
अहिले हामीले समाजवादको लागि टेक्ने ठाउँ बनाउनु छ । त्यसकारण पहिलो काम भनेको पुरानो शैलीको संरचना भत्काउन अनिवार्य भएको छ । यदि यो काम गर्न यो सरकारले सक्दैन भने यहाँ सधै जनविरोधि निर्णयहरु भइरहने छन् । त्यसकारण यो सरकारले पहिला आमूत परिवर्तनको काम गर्नु पर्छ ।